ပျင်းမယ်ဆို ပျင်းလို့ရပါတယ် - For Her Myanmar
6 days ago by Wai Zin
တစ်ရက်လောက်တော့ တစ်နေကုန်လုံး ပျင်းရိခြင်းအကြောင်း ၆ပါးနဲ့ညီအောင်ကို ပျင်းပစ်ဦးမယ်.. ဟွင်း ဟွင်း…
မိန်းမပျင်း ကျောခင်းတဲ့.. ဒီလောက်ပျင်းနေမှဖြင့်တော့ ဘယ်တော့မှလဲ တိုးတက်လာမှာ မဟုတ်ဘူး ဆိုတဲ့ စကားတွေကို ခဏတာ လျစ်လျူရှုကြည့်လိုက်ပါ။
တစ်ရက်တလေတော့ အကြောင်းပြချက်မရှိလည်း ပျင်းချင်ရင် ပျင်းလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေး ယောင်းတို့ကို ဒီနေ့ လက်တို့ပြီး ပြောပြချင်လွန်းလို့။
ဘာတွေကို ပျင်းသင့်လဲ ဘာကြောင့် ပျင်းသင့်လဲ ??အကြောင်းပြချက်မလိုဘူး ယောင်းတို့ရဲ့။ ဘယ်လိုမျိုးလေးတွေလဲ ဆိုတော့….
အလုပ်ပိတ်ရက်မှာ အိပ်ရာထဖို့ပျင်းနေရင် ပျင်းလိုက်ပါ ။
မိန်းကလေးမို့ စောစောထရမယ် အကျင့်ပျက်မှာကြောက်လို့ ဆိုတဲ့ စိုးရိမ်စိတ်မဝင်ဘဲ ဘယ်သူဘာပြောပြော ပျင်းပျင်းနဲ့အိပ်ပစ်လို့ရပါတယ် ။ ငိုတောင်းမဲ့ကလေးမရှိသေးရင် ဆယ်နာရီထိ အိပ်ပေါ့ ဘာဖြစ်လဲ နော် ။ တစ်ရက်တလေ ပျင်းပျင်းနဲ့ အိပ်လို့ရတာပဲ။ အိပ်လွန်းလို့ တရားစွဲတဲ့ ဥပဒေလည်း မရှိဘူးလေ.. ဟုတ်ဘူးလား?
မနက်စာနဲ့ နေ့လယ်စာ ပေါင်းစားလည်း ရတာပဲ ။ ကိုယ့်မှာ ထမင်းစားချိန်မမှန်ရင် ဗျစ်တောက်ဗျစ်တောက် ဆူမဲ့ငေါက်မဲ့သူမရှိရင် ဗိုက်ဆာတဲ့အချိန်မှာပဲ ထစားလိုက်ပေါ့။ အစာအိမ်ဖြစ်မယ် ဗိုက်အောင့်မယ် ဆိုတဲ့ တစ်နပ်လောက်လွှတ်ရင် ရောဂါဖြစ်ချင်တဲ့ ဆိုက်ကိုကိုလည်း တိုက်ဖျက်ပြီးသား ဖြစ်တာပေါ့။ (အမြဲတမ်းတော့ မဆိုလိုဘူးနော်.. ထမင်းစားဖို့လည်း ပျင်းချင် ပျင်းနေလိုက်ပါ။ ပိုက်ဆံသာရှိရင် ၂၄နာရီဆိုင်တွေ ပေါတာပဲ မဟုတ်လား။
လူကြားသူကြားသွားစရာရှိသည်ဖြစ်စေ၊ မရှိသည်စေ အကြောင်းပြချက်မရှိ ပျင်းလို့ရပါတယ်။တစ်ဘက်ကို အားနာရမှာ စိုးရင်တော့ ရေမွှေးလေးများများသာ ဖြန်းပြီးနေလိုက်ပါ.. အရမ်းကြီး အနံ့မဆိုးနေဖို့တော့ လိုတာပေါ့နော်.. ရေချိုးတာကို တာဝန်တစ်ခုလို သဘောမထားဘဲ ယောင်းတို့ပျင်းချင်ရင် ပျင်းလို့ရပါတယ်။ ရေချိုးမှ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သန့်တယ်ထင်ပြီး သွားဖို့လာဖို့ စောစောထရ အချိန်မီ ရေချိုးရတာတွေခဏမေ့ပြီး ပျင်းချင်ရင် ပျင်းကြည့်လိုက်ပါ။
Related Article >>> အပျင်းကြီးတတ်တဲ့ မိန်းကလေးတွေရဲ့ အမူအကျင့်လေးများ
ကိုယ့်မှာ အကြောင်းပြချက်မရှိလည်း သင်တန်းကို တစ်ရက်တလေတော့ ပျက်ခွင့်ရှိပါတယ်။ ယောင်းတို့သာ အတန်းချိန်မှန်နေခဲ့ရင်ပေါ့။ တစ်ရက်တလေ တစ်ရက်တလေနဲ့ များသွားလို့လည်း မဖြစ်ဘူးလေ.. တစ်ရက်လောက်ပျက်တာနဲ့ အစက ပြန်စသင်ရမယ့် အတန်းလည်း မကြားဖူးသလောက်ပါပဲ ။ တစ်ခါတလေကျ သင်ယူရတာကိုလည်း ပျင်းတဲ့စိတ်ဝင်မိတာပါပဲ။ သင်တဲ့အချိန်ပေါ်လိုက်လို့ ဒေါ်လာနဲ့ရှင်းရတဲ့ သင်တန်းတွေလည်း စိတ်က တစ်ခြား လူကတခြားဆို သင်တန်းထဲရောက်နေလည်း မထူးတာမို့ သင်တန်းကိုလည်း သင်ချင်စိတ်မရှိရင် တစ်ရက်တလေတော့ ပျင်းလို့ရပါကြောင်း။ (ရိုးကောလ် မပြည့်လို့ ဆူခံရရင် အက်ဒ်မင်မပါဘူးနော် :P)
ကိုယ့်မှာ တစ်ခါတလေကျ လုပ်ငန်းခွင်ပျင်းရိမှုဆိုတာ ရှိလာတာ မဆန်းဘူးလေ။ အလုပ်ထဲက လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်နဲ့ အကြောင်းပြချက်မရှိ မျက်နှာချင်းမဆိုင်ချင်လို့ဖြစ်ဖြစ် ဘာအကြောင်းပြချက်မှ မရှိရင်တောင် ယောင်းတို့တစ်ရက်တလေတော့ အလုပ်သွားဖို့ပျင်းလို့ရပါတယ်။ တစ်နေ့တစ်နေ့ လုပ်နေရတာ ဒါတွေဒါတွေပဲ ဆိုတာမျိုးတွေ၊ ဒီလူတွေနဲ့ပဲ ဒီစကားတွေပဲ အက်ကြောင်းထပ်အောင်ပြောနေရတာကို ငြီးငွေ့လို့ စိတ်များမပါရင်လည်း တစ်ရက်တလေတော့ နေမကောင်းခွင့်တင်ပြီး အနားပေးလိုက်လို့ရပါတယ်။ ဒါတွေက ပျင်းတယ်လို့ ပြောရမှာထက် ကိုယ့်စိတ်ပင်ပန်းမှု သက်သာစေဖို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အနားပေးလိုက်တာမျိုးပါပဲ။ တစ်ရက်နဲ့တော့ ကိုယ့် ကမ္ဘာကြီးပြောင်းလဲ မသွားပါဘူး။
ရည်းစားနဲ့ ဒိတ်မလုပ်ဘဲ ပျင်းနေလို့ရတယ်။
ရန်တိုက်ပေးတာတော့ မဟုတ်ဘူးနော်။ တစ်ခါတလေ စိတ်ထဲ သူ့လည်းမတွေ့ချင်ဘူး (စိတ်ဆိုးနေလို့မဟုတ်ဘူးနော်) ဒီတိုင်း မိန်းကလေးတွေစိနမိတ်က ဘယ်ဆရာဝန်မှ ကုလို့မတတ်လို့ ရောဂါဆန်းတွေရှိစမြဲမို့ ဘာအကြောင်းပြချက်မှ မရှိ ”ငါ မအားဘူးဟယ်”ဆိုပြီး ပျင်းပျင်းနဲ့ ဇာတ်ကားတွေပဲ လှိမ့်ကြည့်နေတာ လည်း လုပ်လို့ရတာပဲ။
အိမ်မှာ ကြောင်လေးတွေ ခွေးလေးတွေနဲ့ပဲ ကစားနေလည်း ရတာပဲလေ။ သူတို့နဲ့ပဲ ကိုယ့်စကားသူနားလည်သလိုလို သူ့စကားကိုယ်နားလည်သလိုလို၊ သူတို့ကို ရင်ခွင်ထဲထည့်ပွေ့ထား စကားတွေဖောင်နေအောင်ပြောမှာပေါ့ (ကိုယ့်ရည်းစားဆီ ပြောဆိုလို့ မရခဲ့သမျှ သူတို့လေးတွေဆီိ ရင်ဖွင့်ပေါ့)
တစ်ယောက်တည်း အကြောင်းပြချက်မရှိ လျှောက်လှိမ့်နေပြီး ပျင်းလို့လည်း ရပါတယ်။
ပျင်းတာနဲ့ တစ်ယောက်တည်း ကားပတ်မောင်းတာ ( ကားရှိရင်ပေါ့ ) ၊ နယ်တွေမှာဆို ဆိုင်ကယ်ပတ်စီးတာ စက်ဘီးပတ်စီးနေတာ တွေလည်း လုပ်လို့ရတာပဲ ။ အဲ့သလိုပဲ ကိုယ်ဝါသနာပါရာနဲ့တော့ ပျင်းပျင်းရှိ လုပ်နေလို့ရတာပါပဲ။ တစ်ခါတလေကျ အရမ်း ရယ်ရတယ် ကုတင်ပေါ်ကနေ ကျနေတဲ့ စာအုပ်လေးတစ်အုပ်လည်း လှမ်းကောက်လိုက်ဖို့ အရမ်းပျင်းနေတာမျိုးတွေ ၊ ပြက္ခဒိန်လေး နောက်လပြောင်းတာကို အသစ်လှန်လိုက်ဖို့လည်း ပျင်းနေတာမျိုးတွေလည်း ရှိတာပါပဲ… အဲ့လို အသစ်လှန်ရမှာပျင်းလို့ ဒိတ်ပျောက်နေတာတွေတောင် ရှိသေး 😀
စဉ်းစားကြည့် ယောင်းတို့ရယ်… လူတွေကြားမှာ လှပစေဖို့ ၊ အထင်ကြီးစေဖို့ ၊ ဘဝတိုးတက်ဖို့၊ သူများတက် ပိုသာဖို့၊ ပိုက်ဆံများများဝင်ဖို့၊ အနာဂတ်မှာ ပိုကောင်းစေချင်လို့ စသဖြင့်သော အကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုး နဲ့ အက်ဒမင်တို့ဟာ တစ်နေ့တစ်နေ့ လှုပ်ရှားနေရတယ်။ မလှုပ်ရှားရင် နောက်ကောက်အများကြီးကျန်ခဲ့တော့မယ့်အတိုင်း… တစ်နေ့တစ်နေ့ ဖြစ်ပျက်နေကြတာ ကိုယ့်ဘာသာ သတိမထားမိနိုင်အောင်ပဲလေ။
ဒါကြောင့် အကြောင်းပြချက်မရှိလည်း ယောင်းတို့ဟာ တစ်ရက်တစ်လေတော့ ပျင်းခွင့်ရှိပါတယ်။ ကိုယ်ပျင်းနေကြောင်းကိုလည်း အမှတ်တရအနေနဲ့ လိုင်းပေါ်မှာ မှတ်တမ်းတင်ထားလည်းရတာပါပဲ။ တစ်ယောက်တည်းသမားဖြစ်ဖြစ် နှစ်ယောက်တည်းသမားဖြစ်ဖြစ် မိသားစုကို ကိုယ့်ခေါင်းပေါ်ရွက်ထားသလို ခံစားနေရရင်ဖြစ်ဖြစ် ဘယ်သူ့ကိုမှ စကားပြောချင်သည်ဖြစ်စေ မပြောချင်သည်ဖြစ်စေ ပျင်းပျင်းနဲ့အိပ်နေနိုင်ပါတယ် အစားတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခု စားနေနိုင်တယ် .. ဇာတ်ကားတွေတစ်ကားပြီး တစ်ကားထိုင်ကြည့်နေနိုင်ပါတယ်။
မိန်းကလေးတွေစိတ်ကို ဖတ်နိုင်ဖို့က ကျမ်းတစ်စောင်ဖတ်ရတာထက် ခက်တယ်ဆိုတာမျိုးလည်း ရှိသားမဟုတ်လား.. ဒီတော့ ခန့်မှန်းရခက်တဲ့ ယောင်းတို့စိတ်အတိုင်း စိတ်တိုင်းကျ တစ်ရက်တလေလောက်ဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ကမ္ဘာလေးကို ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် ခြယ်လှယ်လို့ရပါတယ်။ ပျင်းလို့ရပါတယ်လို့ လက်တို့လိုက်ပါရစေ.. တစ်ချိန်လုံး ပျင်းခိုင်းနေတာမဟုတ်ဘူးနော်.. တစ်ရက်လောက် ကိုယ်စိတ်ကြိုက်လုပ်ချင်ရာလုပ်ပြီး နေကြည့်ဖို့ တိုက်တွန်းချင်တာပါ။ ဒါက ယောင်းရဲ့ စိတ်ကျန်းမာရေးကိုလည်း အများကြီး အထောက်အကူဖြစ်စေတယ်မဟုတ်လား…
ချင်းမိုင်​ သို့မဟုတ်​ အလွဲများနဲ့ ခရီးစဉ်​
ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ လူသားချင်းစာနာမှုအတွက်ဆို ဒီရုပ်ရှင်(၂)ကားကို ကြည့်ကြည့်ပါ။
ဒစ်စနေးမင်းသမီးလေးတွေသာ ဒီဘက်ခေတ်မှာ အလုပ်လုပ်ကြရင်…
ယောင်းတို့ကို ဆွံ့အသွားစေမယ့် Kylie ရဲ့ လက်ကိုင်အိတ်ဗီရိုကြီး